यी ८ हिरोइनहरू एउटै फिल्मबाट रातारात हिट भए र रातारात गायव पनि भए
पाेखरा १५ मंसिर- बलिउड उद्योगमा केही यस्ता अभिनेत्रीको लस्कर छ जो एउटै फिल्मबाट रातारात हिट भए अनि पुनः गुमनाम भए । पहिलो फिल्म नै यति चर्चित भइदियो कि आज पनि ती फिल्म सबैको मनमुटुमा बसेको छन् र ती अभिनेत्री । उनीहरुले एउटै फिल्म खेलेपछि आफूलाई एकाएक गायब गराए ।बलिउड जस्तो विश्वमै सफल फिल्म उद्योगबाट किन मुख मोडे त ती अभिनेत्रीले ? कारण यस्तो छः
१. सोनमः ‘ओए ओए’ नामले परिचित सोनमले ‘विजय’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी थिइन् । उनले फिल्म निर्माता राजीव रायसँग विवाह गरिन् । तर उनीहरु धम्कीको सिकार हुन पुगे र दम्पतीले नै बलिउड छोडे ।
२.भूमिका चावलाः सर्वाधिक चर्चित फिल्म ‘तेरे नाम’ बाट डेब्यु गरेकी भूमिका चावलाको अभिनय निकै उत्कृष्ट थियो । तर योग गुरु भरत ठाकुरसँग विवाह गरेपछि उनी फिल्म क्षेत्रबाट टाढिइन् ।
३.ग्रेसी सिंहः सुन्दर अभिनेत्री ग्रेसी सिंहले ‘लगान’ बा लोकप्रियता हासिल गरेकी थिइन् । तर उनले अर्को फिल्म खेल्ने चाहाना गरिनन् ।
४.महिमा चौधरीः बलिउडका अभिनेत्रीहरुमध्ये फरक अनुहार हो महिमा चौधरी । उनको पहिलो फिल्म ‘परदेश’ पछि फेरि बलिउडमा छाउन सकिनन् ।
५.ममता कुलकर्णीः गलत बानीले बलिउडबाट टाढिएकी अभिनेत्री ममता कुलकर्णीले ‘वक्त हमारा है’ र ‘करण अर्जुन’ जस्ता चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । उनको अभिनयको धेरैले प्रशंसा गर्छन् । तर उनले आफूलाई बलिउडमा अब्बल बनाइराख्न सकिनन् । सन् २००२ मा आएको फिल्म ‘कभी तुम कभी हम’ पछि बलिउडलाई विदाईको हात हल्लाईन् ।
६.अश्विनी भावेः फिल्म ‘हिना’बाट चर्चा कमाएकी अश्विनी भावेले खेलेका दोस्रो, तेस्रो फिल्मले बलिउडमा चर्चा पाएन । त्यसपछि उनी अमेरिका भासिइन् ।
७.मन्दाकिनीः फिल्म ‘राम तेरी गंगा मैली’ बाट मन्दाकिनी रातारात हिट बनिन् । पहिलो फिल्मबाट नै चर्चा कमाएकी मन्दाकिनीको भेट अन्डरवल्र्ड डन दाउदसँग नाम जोडियो । त्यसपछि उनी फिल्म क्षेत्रबाट नै हराइन् । उनले सन् १९९० मा विवाह गरिन् ।
८.अनु अग्रवालः ‘आशिकी’ बलिउडकै एउटा हिट फिल्म हो । फिल्मले अनु अग्रवाललाई उचाईमा पुर्यायो । उनको अभिनयको तारिफ निकै भयो । पहिलो फिल्मबाट सफलताको शिखरमा पुगेकी अनुले फेरि उकालो लाग्ने सपना देखिनन् उनले सन् १९९६ मा सांसरिक सुखलाई छोडेर योग र अध्यात्म तिर लागिन् ।